आफ्नै देशको एयरपोर्टमा सरकारले सामान लुटेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित हुने क्रम अझै रोकिएन – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, माघ २९, २०७५१३:४९0
काठमाडौं, २९ माघ । आफ्नै देशको एयरपोर्टमा सरकारले जफात गरेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित हुने क्रम अझै रोकिएको छैन । विदेशबाट स्वदेश फर्किंदा एकभन्दा बढी सामान ल्याएमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जफत गर्ने र पछि लिलामी गर्दै आएको छ ।
सरकारको यो निर्णयको विरोधमा देशदेखि विदेशसम्म रहेका नेपाली आक्रोशित देखिएका छन् । खासगरी ५० लाख नेपाली जो रोजगारीका लागि मलेसिया, दुबईका साथै खाडी देशमा रगत र पसना बगाइरहेका छन् । उनीहरूले घर फर्किंदा परिवारका सदस्यलाई ल्याइदिएको घडी, मोबाइल, टिभी, रक्सीलगायतका सामान एयरपोर्टमै जफात हुने गरेको छ ।
यही विषयमा सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको यो स्टाटस निकै मार्मिक छ । जसले आफ्नो देशको सरकारप्रति आमनागरिकको धारणा कस्तो रहेछ भन्ने स्पष्ट पार्छ । स्टाटसमा लेखिएको छः
विदेश जाँदा बोकेको दुई बट्टा अचार र फर्कंदा ल्याएको दुई बोतल रक्सी समातेर लिलामी गर्दा ती ५० लाख विदेशिएका युवायुवतीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले तिम्रो सरकार र देशको अर्थतन्त्र चलेको चाहिँ बिर्सियौ हैन सरकार ? ग्यारेन्टी दिन्छु तिमीहरूलाई परदेशीको आँसु लाग्नेछ । सरकार, लिलामी नै गर्ने हो भने त्यो ३३ किलो सुनको गर । समात्ने नै हो भने वाइडबडीमा चार अर्बको भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई, लडाकु शिविरमा ६ अर्ब खानेहरूलाई, आयल निगममा १८ करोड खानेहरूलाई, एनसेलमा ६३ अर्ब अनि बुढीगण्डकीको नौ अर्ब खानेहरूलाई समात । हिम्मत छ ? हैन भने गरिब जनताले विदेशमा रगत र पसिना बगाएर कमाएको दुई पैसामाथि गिद्दे आँखा लगाएर उनीहरू एयरपोर्टबाट रुँदै बाहिर निस्किनुपर्ने किन ? विदेश जाँदा मेनपावरहरूले लुट्ने, दलालहरूले लुट्ने, इन्स्योरेन्सले लुट्ने र श्रम बिभागले लुट्ने ! गरिबहरूलाई यसरी कहिलेसम्म लुटिरहने चुसिरहने ? आवाज ५० लाख नेपालीहरूको ।
काठमाडौँ मैंजुबहालमा मोटरसाइकल पल्टिँदा चालकको मृत्यु
पहिलो पटक नेपाली न्यानो स्याटलाइट प्रक्षेपण , प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘नेपाल अन्तरिक्ष युगमा’
दाङको लमहीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, दुई घाइते